Apkkwr Junior Member
09-07-2016, 10:15 PM ရန်ကုန်မှာ အသက်အရွယ်အကန့်အသတ်မရှိသွားလို့ရတဲ့ ဟော်တယ်တွေရှိလား? ညွှန်ပြပါ ပြီးတော့ ဗိုက်မကြီးအောင် ဘိုလုပ်ရမလဲ? ? မြေနီကုန်းက ဈေးသက်သာမယ့်နေရာတွေပြောပြပါ
Thanks given by: lamadev
smart1500 Junior Member
09-10-2016, 12:24 AM (09-07-2016, 10:15 PM)Apkkwr Wrote: ရန်ကုန်မှာ အသက်အရွယ်အကန့်အသတ်မရှိသွားလို့ရတဲ့ ဟော်တယ်တွေရှိလား? ညွှန်ပြပါ ပြီးတော့ ဗိုက်မကြီးအောင် ဘိုလုပ်ရမလဲ? ? မြေနီကုန်းက ဈေးသက်သာမယ့်နေရာတွေပြောပြပါ
ဗိုက်မကြီးအောင် ezee2 သာ သောက်ခိုင်းလိုက်ပါ .. အကောင်းဆုံးပါပဲ ...
Thanks given by: gregorasyandext8706
zizizi12 Junior Member
10-14-2016, 11:38 PM (09-10-2016, 12:24 AM)smart1500 Wrote: (09-07-2016, 10:15 PM)Apkkwr Wrote: ရန်ကုန်မှာ အသက်အရွယ်အကန့်အသတ်မရှိသွားလို့ရတဲ့ ဟော်တယ်တွေရှိလား? ညွှန်ပြပါ ပြီးတော့ ဗိုက်မကြီးအောင် ဘိုလုပ်ရမလဲ? ? မြေနီကုန်းက ဈေးသက်သာမယ့်နေရာတွေပြောပြပါ
ဗိုက်မကြီးအောင် ezee2 သာ သောက်ခိုင်းလိုက်ပါ .. အကောင်းဆုံးပါပဲ ...ကွန်ဒုံး သုံး မသုံးချင်ရင် ဆေးတိုက် eazee2ပသောက်၇င်တော့၇တယ် ခဏ ခဏ သောက်ရင်တော့ မကောင်းဘူး အကောင်းဆုံးက ခဏခဏ လုပ်ချင် နေရင် တော့ ဆရာ ၀န်နဲ့ birth control လုပ်ဖို့ ဆေးတောင်းတာ အကောင်းဆုံးဘဲ ဥပမာ ၁ နှစ်ခံပေါ့ Find
10-26-2016, 06:19 PM (10-14-2016, 11:38 PM)zizizi12 Wrote: (09-10-2016, 12:24 AM)smart1500 Wrote: (09-07-2016, 10:15 PM)Apkkwr Wrote: ရန်ကုန်မှာ အသက်အရွယ်အကန့်အသတ်မရှိသွားလို့ရတဲ့ ဟော်တယ်တွေရှိလား? ညွှန်ပြပါ ပြီးတော့ ဗိုက်မကြီးအောင် ဘိုလုပ်ရမလဲ? ? မြေနီကုန်းက ဈေးသက်သာမယ့်နေရာတွေပြောပြပါ
ဗိုက်မကြီးအောင် ezee2 သာ သောက်ခိုင်းလိုက်ပါ .. အကောင်းဆုံးပါပဲ ...ကွန်ဒုံး သုံး မသုံးချင်ရင် ဆေးတိုက် eazee2ပသောက်၇င်တော့၇တယ် ခဏ ခဏ သောက်ရင်တော့ မကောင်းဘူး အကောင်းဆုံးက ခဏခဏ လုပ်ချင် နေရင် တော့ ဆရာ ၀န်နဲ့ birth control လုပ်ဖို့ ဆေးတောင်းတာ အကောင်းဆုံးဘဲ ဥပမာ ၁ နှစ်ခံပေါ့ Happy Sound (Music Cafe')
၁၄၊ရှမ်းကုန်းလမ်း၊မြေနီကုန်း အဲ့တာတော့ရှိတယ် ဟော်တယ်တော့မဟုတ်ဝူး Music Cafe ပါ bro အခန်းခ
၃ ယောက်ခန်း 3000Ks/1hr
၅ ယောက်ခန်း 5000Ks/1hr
ဖွင့်ချိန် 9:00Am to 8:00Pm
soelinoo Junior Member
01-16-2017, 06:57 PM (09-10-2016, 12:24 AM)smart1500 Wrote: (09-07-2016, 10:15 PM)Apkkwr Wrote: ရန်ကုန်မှာ အသက်အရွယ်အကန့်အသတ်မရှိသွားလို့ရတဲ့ ဟော်တယ်တွေရှိလား? ညွှန်ပြပါ ပြီးတော့ ဗိုက်မကြီးအောင် ဘိုလုပ်ရမလဲ? ? မြေနီကုန်းက ဈေးသက်သာမယ့်နေရာတွေပြောပြပါ
ဟုတ်တယ် ezee2 သာအသင့်တော်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးပါညီ...